I-Magnetic Separator Yabahlinzeki Basezimayini Metallic kanye neFektri - I-China Magnetic Separator Yabakhiqizi Basezimayini Metallic
Isicelo: Ingasetshenziswa ekusetshenzisweni okumanzi - i-1.2 mm (- 200 mesh ka-30 ~ 100%) i-ore ebomvu (i-hematite ne-limonite, i-siderite, njll.), I-manganese ore, ilmenite, chromite, i-tungsten ore kanye nezinye izinhlobo zamaminerali angenamandla, namaminerali ansimbi, njenge-quartz, feldspar, nepheline ore, kaolin yokususa insimbi yokungcola nokuhlanzwa.
Uchungechunge lwe-JCTN Ukuphakamisa ibanga le-Cocentrate kanye ne-Decreasing Dregs Okuqukethwe Drum Permanent
Isicelo: Isetshenziselwa ukuthuthukisa ukugxila kwe-iron kwesitsha sokuwasha noma isitshalo sokuhlomula ngokuthuthuka ngo-3% -9% Fe%.
Isihlukanisi se-elekthronikhi se-electromagnetic
Isicelo: Lo mkhiqizo usetshenziselwa ukugxilisa i-magnetite ukususa kahle i-monomer gangue nokunye okungcolile ukuze uthuthukise i-Fe% ekugxiliseni.
Uchungechunge lwe-CTB Wet Drum unomphela Osezingeni eliphakeme we-Magnetic
Isicelo: Ukuhlukanisa izinhlayiya ezinamandla noma ukuqeda i imfucumfucu yamagnetic evela kumaminerali angewona awamandla kazibuthe.
Isicelo: Uchungechunge lwe-CTY olumanzi olusebenzisa unomphela olwenzelwe i-ore enozibuthe ngaphambi kokugaya ekucaleni nasekulahleleni imisila.
Uchungechunge lwe-CTDM Multi - I-Pole Pulsating Magnetic Separators
Isicelo: I-CTDM ewuchungechunge ama-multi-pole edonsela ohlukanisi bezinhlayiyana uhlobo olusha lokuhlukanisa amandla kazibuthe osezingeni eliphezulu okwenzelwe ibanga eliphansi nama-ore deposits enomhlabathi omningi namatshe e-gangue.
Uchungechunge lwe-NctB lokucekelwa phansi kwe-Magnetic Concentrate Separator
Isicelo: Isetshenziselwa ukuthuthukisa okuhlushwa, okwenzelwe ukucubungula ukuhlukaniswa kwamandla kagesi.
Isicelo: Iguqulwe ngosayizi wezinhlayiyana 0 ~ 30mm, ibanga phakathi kuka-5% kuya ku-20% wamazinga aphansi we-magnetite ne-ore eyimpuphu eyomile ukuze kulungiselelwe. Thuthukisa ibanga lokuphakelwa lokugaya bese unciphisa izindleko zokucubungula amaminerali.
Uchungechunge lweCDD Dry Medium Intensity
Isicelo: Isetshenziselwa ukukhipha i-gangue kusuka enhlama ye-magnetite ore ngemuva kokuchotshozwa ukuze ikhulise amandla we-concentrator, noma ukubuyisa i-magnetite ore etsheni lokungcola.
Uchungechunge lwe-YCW Awukho Umshini Wokubuyisa Umthamo Wamanzi
Isicelo: Umshini wokukhipha amanzi ongenayo i-YCW ewuchungechunge kanye nomshini wokulungisa isetshenziswa kabanzi ekuvuseleleni nasekusebenzeni kahle kwezinto ezisetshenziswa ngogesi ezindaweni zokulahlwa kukadoti ezihanjiswe ngo-metallurgy, izimayini, insimbi engaholi, igolide, izinto zokwakha, amandla, amalahle nezinye izimboni, nokugeza amalahle isitshalo, imisebenzi yensimbi (i-slag yensimbi), isitshalo esokonayo, njll.
I-Air Force Dry Magnetic Separator
Isicelo:Lo mkhiqizo uluhlobo lomoya ohlukanisa amandla omoya ohlukanisa amaminerali ayimpuphu, okuwukusebenza kokuhlushwa ukuze kusetshenzwe izinto ezomile ezakhiwe kahle. Kusebenza ukuzuzwa kwe-magnetite ezindaweni ezinesomiso noma ezibandayo futhi nokuphinda kusetshenziselwe ukwenziwa kabusha kwensimbi ye-particle iron slag ekhiqizwa kwinqubo yensimbi noma yensimbi.
Uchungechunge lwama-elekthronikhi we-electromagnetic olupholisa ngokwawo ochungechunge
Isicelo: Ukususa isitembu sensimbi ezintweni ezahlukahlukene ezihambiselana nebhande ngaphambi kokuchoboza futhi isetshenziswe endaweni enokhahlo.